Linus Torvalds: Linux 3.20 sa 4.0? | Avy amin'ny Linux
Linus Torvalds: Linux 3.20 sa 4.0?
40 minitra na lasa izay Linus no nanoratra izany tao amin'ny piraofilina google plus
Efa nitabataba aho nandritra ny fotoana kelikely fa TSY mila hafa (linux) 2.6.39 hafa aho izay misy ny isa lehibe ka tsy afaka manavaka azy ireo ianao.
Manakaiky an'izany isika, miaraka amin'ny andiany 3.20 efa antomotra, ary lany rantsantanana sy rantsan-tongotra indray aho.
Efa nitabataba nandritra ny fotoana kelikely aho momba ny fifindrana amin'ny kinova 4.0. Nefa andao jerena izay eritreritry ny olona.
Ka - manohy hatramin'ny 3.20 ve isika satria maro ny olona mahafatifaty, sa mifindra mankany amin'ny 4.0 isika ary mamerina ny isa amin'ny zavatra kely kokoa?
PS: Mba hanazavana: ny "kinova lehibe" dia manondro ny 20 amin'ny 3.20 fa tsy ny 4 amin'ny 4.0. Toy ny hoe tsy nanazava azy ilay safidy hafa. Saingy ity fanadihadiana ity dia momba ny olona mora misafotofoto.
Efa manana vato sahabo ho 600 ao anatin'ny 40 minitra. Inona no lazain'izy ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Linus Torvalds: Linux 3.20 sa 4.0?
ho ahy ny fitsambikinana dia taorinan'ny 9 taona, satria maro amintsika no misavoritaka, indrindra fa ny gnome sy ny voany
Ilay lehilahy tsotra ihany manontany fa tsy mametraka
Ho ahy dia tsy maintsy mamaly izany raha misy fiovana tena lehibe ao amin'ny Kernel, fandrosoana lehibe na andianà vaovao manaitra sy mahasoa ho an'ny rehetra.
Heveriko fa ny fandrosoana amin'ny tsy famerenana miverina rehefa manavao ny kernel dia manan-danja ampy hifindrana amin'ny 4.0. Ny mpampiasa tsotra dia tsy misy akony firy, fa alaivo an-tsaina fotsiny ny server ...
eco-slacker dia hoy izy:
Heveriko fa ny patches mivantana dia mety ho antony tsara amin'ny fitsambikinana amin'ny isa.
Heveriko fa tonga ny fotoana ho an'ny Linux 4
peterczech dia hoy izy:
Nandray anjara tamin'ny fanadihadiana aho ary niankina tamin'ny kinova 4.x satria tena nisy fiovana maro ny kernel hatramin'ny nanombohan'ny andiany 3.x. Ny kernel 3.20 na 4.0 ihany koa dia hitondra zava-baovao ... Fanavaozana mafana tsy misy reboots ary izany dia mendrika kinova vaovao an'ny kernel: D.
Josep M. Fernandez dia hoy izy:
Nifidy ny safidy voalohany aho. Mandeha be ny boriky na tsia.
Valiny tamin'i Josep M. Fernández
Nandray anjara ihany koa aho ary toa an'i Petercheco heveriko fa misy fiovana maro hanohizana ny fiheverana azy io ho kinova kely, fotoana tokony hiovan'ny isa ho 4.x ary rehefa ampiana fanatsarana dia mitsambikina amin'ny kinova 5 (rehefa efa maro na betsaka ny voamarika) ary raha tsy miakatra 0.1 ka 0.1 (avy amin'ny kinova 4.1 ka 4.2 sns)
Jesosy Perales dia hoy izy:
4.0 dia toa tsara kokoa noho ny 3.20 fa ny fanarahana ny fanovana semantis dia tsy marina, fa raha manaraka azy isika dia hiafara amin'ny kernel 2
Valiny tamin'i Jesosy Perales
napsix dia hoy izy:
Azo antoka, mandroso amin'ny 4.0
linuXgirl dia hoy izy:
Ny zavatra lojika dia ny mandray ny isa ka hatramin'ny 10, izany hoe 3.1, 3.2 ... 3.10, ary aorian'izay dia mankany amin'ny 4.0, araho ny dingana mitovy mandra-pahatongan'ny 10 sns. Tena mitondra azy amin'ny 20 na avo kokoa toa adala.
Mamaly an'i linuXgirl
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia ilaina (fa tsy vitako ilay hevitra teo aloha) mba hankany amin'ny 4.0 izao. Tsy mijanona bebe kokoa ny kaonty.
zetaka01 dia hoy izy:
Voalohany - Ny fandikan-teny dia raha ny kely indrindra dia mpandika teny ho azy.
Faharoa - Tsy maintsy manazava ny dikan'ny kernel linux sy ny dikan-teny hafahafa ianao.
Valio i zetaka01
Ankoatra ny fijery vazivazy dia azonao atao ny mampiasa ny kernel Hurd na ny kernel BSD.
Tratry ny zoma 13 .. Heveriko fa ho an'i Etazonia fotsiny izany, ho an'ny Hispanika dia talata izao. Fanjanahana tsara.
Nanao ny anjara birikiko tamin'ny kernel ihany koa aho. Izy io dia tsy nihomehy.
Tsy dia mahay anglisy firy aho, fa mahamenatra ahy izany fandikan-teny izany. Ireo smartass rehetra namaly, dia toa mankasitraka anao izy ireo na misy zavatra omena anao. Hatsarao ny anglisy.
gabrielus dia hoy izy:
Miankina amin'ny 4.0 aho. Araka ny nolazain'ny maro, miaraka amin'ny fampiharana tsy misy famerenana kernel dia efa tsara sy zava-dehibe ny fanovana ny kinova, miaraka amin'ireo fiasa hafa efa hitantsika tamin'ny kinova teo aloha.
Tsy maninona ny zavatra fandikan-teny, takatra izany. Betsaka ny fanehoan-kevitra milaza izany, betsaka ...
Valiny tamin'i Gabrielus
Taorian'ny valiny feno fihantsiana maro izay nomeko anao, na saika troll, araka ny fahitanao an'i Linus. Manao toy izany koa aho, saingy mihaja kokoa.
Ny smartass rehetra? … Nah, tsy eo aho… LOL!
kevinjhon dia hoy izy:
4.0.0 ho tsara
Mamaly an'i kevinjhon
mahery vaika dia hoy izy:
Ny iray hafa miankina amin'ny kinova 4
Miala tsiny fa manidina manidina aho, tiako izany. Ny kinova miorina dia ireo tsiroaroa. Hitsambikina avy amin'ny 3. zavatra iray ka hatramin'ny 4. zavatra iray. Toy ny python izy io, efa nanandrana nahazo ny kinova 3 nandritra ny arivo taona.
Francisco Molina-Jimenez dia hoy izy:
Hankany mivantana amin'ny kernel 4.0 aho
Valiny tamin'i Francisco Molina Jimenez
Alaharo ny valiny mandeha ho azy amin'ireo hafatra miditra ao amin'ny Gmail
LXQT 0.9.0: QT5 madio